नेपालीको महान् पर्व बडादसैँ सुरु, आज घटस्थापना : ‘गहुँ नराखेर जौँ’को जमरा किन राखिन्छ ?
काठमाडौँ / प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नेपालीको महान् पर्व बडादसैँ आजदेखि सुरु भएको छ । यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म १५ दिन धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ ।
जौँ नै किन उमार्ने ? धान, गौँ किन नउमार्ने भन्ने विषयमा फरक फरक मत छ । विशेष गरी अन्नमा पनि जौँलाई सबैभन्दा पुरानो अन्नको रुपमा लिइन्छ र जौँ भगवानको प्रिय वस्तुसमेत भएकाले यसको प्रयोग गरिएको हो ।